Matatu matatu oiri akanyudzwa transformer
Iko kuita kweS9 yedu, S10. S11 yakateedzana 20kV uye 35kV matatu-chikamu mafuta-akanyudzwa transformer anoenderana neyakaenzana GB1094-1996 "Power Transformer" uye GB / T6451-2008 "technical Parameter uye Zvinodiwa zveChitatu-chikamu Oiri-yakanyudzwa Simba Shanduko" Iyo simbi simbi inogadzirwa yemhando inotonhorera-yakakungururwa nesilicon simbi sheet, uye iyo coil inogadzirwa yemhando isina okisijeni-isina mhangura, iine maonero akanaka uye yakachengeteka kumhanya.
S9-M S10-M S11-M S11-MR kuendesa shanduko
Kuitwa kweiyo modhi S9-M, S10-M, S11-M, S11-MR 10kV akateedzana akazara-akanyudzwa mafuta-akanyudzwa ekuparadzira maTransformer anoenderana nematanho GB1094 "Power Transformer uye GB / T6451-2008" technical Parameter uye Zvinodiwa zveTatu- chikamu Mafuta- akanyudzwa Simba Shanduko.
SH15 dzakateerana amorphous chiwanikwa zvakazara akanyudzwa transformer
SH15 akateedzana amorphous chiwanikwa chakazara-chisimbiso transformer inguva yekugadzira tekinoroji uye trans-century "Girinhi" chigadzirwa Iyo simbi base amorphous chiwanikwa musimboti ine yakakwira kuzadza magnetic inducbon kusimba, kuderera kurasikirwa (kwakaenzana ne1 / 3-1 yesilicon sheet), yakaderera yekugadzirisa simba uye yakaderera yekunyaradza yazvino uye yakanaka tembiricha kudzikama Inofananidzwa neS9 dzakateedzana nesiliconi jira, iyo isina-mutoro kurasikirwa kweiyo transformer ine amorphous alloy musimboti yakaderedzwa ne 70-80%, hapana-mutoro wazvino wakaderedzwa ne50% uye mutoro kurasikirwa yakaderedzwa ne20%.
Yedu SC (B) akateedzana epoxy resin yakakandwa yakaoma transformer inokandirwa pasi pechina neakaonda insulating mabhendi otomatiki. Musimboti unogadzirwa nesilic sheet yakakwira-inokwenenzverwa yezviyo uye inokandwa pamwe nekunze epoxy resin.
SG1 mhando H kirasi yakadzivirirwa yakaoma mhando ramasimba shanduko
Iyo yakaoma yerudzi shanduri ine anotevera ekuisa makirasi: kirasi B. kirasi F. kirasi H, kirasi C. nezvimwewo kwavo kupisa-kutsungirira tembiricha iri zvakateerana 130C, 155C, 180C, uye 220C Sekugamuchira zvinhu zvitsva uye nyowani tekinoroji yeDepont, iyo modhi SG (B) yakaoma mhando shanduko yasvika mukirasi H yemafuta ekutsungirira, uye imwe yayo yakakosha nzvimbo yakasvika mukirasi C yekupisa kwekutsungirira.